५२ वर्षपछि उपाधि होडमा रहेको इंग्ल्याण्डलाई रोक्ने दाउमा ट्युनिसिया ! « Onlinetvnepal.com
५२ वर्षपछि उपाधि होडमा रहेको इंग्ल्याण्डलाई रोक्ने दाउमा ट्युनिसिया !
Published : 18 June, 2018 7:04 pm
रुस विश्वकप जारी रहँदा महारथी टिमहरुको नतिजाले समर्थकहरु त्यति धेरै खुशी हुन सकेका छैनन् । यसै क्रममा फुटबलको अर्को महारथी इङ्ल्याण्डले सोमबार पौने १२ बजे ट्युनिसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । समूह जीमा यी दुई सँगै बेल्जियम र पानामा पनि रहेका छन् ।
विश्वकपको उपाधि समेत उचालिसकेको इंग्ल्याण्ड अहिले फिफा वरीयतामा १३ तथा ट्युनिसिया १४ औं स्थानमा रहेकाले आजको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहिलो पटक सन् १९५० मा विश्वकपको एरेनामा आएको इंग्ल्याण्ड त्यसपछिका सबै संस्करणमा सहभागी हुँदैछ ।सन् १९६६ मा इंग्ल्याण्डले विश्वकपको आयोजना गरेर उपाधि पनि आफै उचालेको थियो । त्यतिबेला जर्मनीलाई ४–२ गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि उचालेको थियो । इंग्ल्याण्ड ५२ वर्षपछि उपाधि चुम्ने दाउमा रहेको छ ।
तर २०१४ को विश्वकपमा नमिठो पराजय भोग्दै इंग्ल्याण्ड समूह चरणबाटै बाहिरएको थियो । २०१८ विश्वकपमा इङ्ल्याण्ड समूह चरण पार गर्न पहिलो खेलमा स्पष्ट ३ अंक लिने प्रयासमा हुने छ ।
सम्भावित ११ खेलाडी
जोडान पिकफर्डले गोलपोस्ट रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका छन् । २७ वर्षीय पिकफर्ड टोटनह्यामबाट खेल्दै आएका छन् । देशका लागि उनी ७ क्याप जितिसकेका छन् ।
म्यानचेष्टर सिटीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने केली वाल्कर पहिलो रोजाईमै पर्छन् । ३५ क्याप जितिसकेका उनको प्रदर्शनले धेरै विपक्षी स्ट्राइकरको टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको छ ।
यसै गरी जोन स्टोन्स, ह्यारी मागुरे र केरियन ट्रिपेयर डिफेन्स लाइनमा हुनेछन् ।
त्यस्तै, ह्यारी केन, रहिम स्र्टलिङ, जोर्डन हेन्डरसन, जेसस लिंगार्डजस्ता खेलाडीको साथले गर्दा इंग्ल्याण्डको टिम बलियो मानिएको छ ।
ट्युनिसिया १९७८ मा पहिलो पटक विश्वकप खेलेको थियो । पछिल्लो विश्वकप २००६ मा खेलेपछि पछिल्ला दुई संस्करणमा उ छनौट हुन सकेन । २०१८ को विश्वकप भने मात्र पाँचौँ सहभागिता हो । ट्युनिसियाले पाँचौ विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदै गर्दा ४ संस्करण भने किर्सन लायकनै छन् । कुनै पनि संस्करणमा ट्युनिसियाले समूह चरण पार गर्न सकेको छैन ।
एम्यान माथलाउटी, डेलन ब्रोन, श्यामबेन युसुफ, याशिन मिराज, अली मालोल, एलियश सखिरी, फिरजानी शासी, ओहबी कजारी र शबेर खालिफा जस्ता खेलाडी ट्युनिसियाका मुख्य हतियार हुन् ।
अहिलेसम्म दुई पटक मात्रै इंग्ल्याण्ड र ट्युनिसिया भिडेका छन् । जसमध्ये १९९० मा भएको मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता १–१ गोलको बराबरीमा टुंगिएको थियो भने १९९८ को विश्वकपको समूह चरणमा भेट हुँदा इंग्ल्याण्ड २–० गोल अन्तरले विजयी भएको थियो ।
ओहावी कजारी मूख्य खेलाडी हुन् । २७ वर्षीय कजारी सण्डरल्याण्डबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका छन् । अहिलेसम्म ३६ क्याप जितेका उनले १२ गोल गरेका छन् ।
ह्यारी केनः टोटनह्यामका स्ट्राइकर ह्यारी केन इंग्लिस प्रिमियर लिगमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन् । बोर्नमाउथ विरुद्धको खेलमा घाइते भएपछि उनी लामो समय मैदान बाहिर रहे । त्यतिबेला उनको गोलीगाँठामा चोट लागेको थियो ।
आईपिएलमा सन्दिप लामिछाने सहभागी दिल्ली क्यापिटल्सको पोस्टमार्टम !
ईन्डियन प्रिमियर लिग ईतिहासमा दिल्ली क्यापिटल्स एकमात्र यस्तो टिम हो जुन अहिलेसम्म फाईनल प्रवेश गर्न
खुसीयाली मनाउने क्रममा अनुचित व्यवहार गरेको भन्दै रोनाल्डोमाथि २० हजार युरो जरिवाना
काठमाडौं – विश्व चर्चित फुटबल स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोमाथि खेलका क्रममा अमर्यादित ब्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै
२०२२ को कतार विश्वकपमा ४८ टिम हुने : कुवेत र ओमानमध्ये एक सह-आयोजक , यस्तो छ तयारी
काठमाडौं – रुसमा सम्पन्न खेलको चर्चा सेलाउन नपाउँदै सन् २०२२ को कतार फुटबल विश्वकपको तयारी
रोनाल्डो संसारकै लोकप्रिय खेलाडीको शिर्ष स्थानमा, कहाँ गए मेस्सी र नेयमार ? पुरा पढ्नुहोस
लोकप्रिय खेलकुद पोर्टल इएसपिएनले विभिन्न आधारमा तय गरेको लोकप्रिय खेलाडीको सूचीमा फेरि पनि पोर्चुगलका फुटबलर
थाहा पाइराखौ जाडोमा घाम ताप्दै बदाम खानुका यस्ता छन् फाइदै फाइदा
बदाम खनिजको स्रोत हो । यसमा प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जाडोयाममा धेरैले बदाम खान
अब काठमाडौँको घर-घरमा प्रहरी पुग्दै !
समाजमा आपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीले समुदायसँग मिलेर काठमाडौँमा ‘घर दैलो’
के रवीलामिछानेको चर्चित कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम बन्द होला त ?
चर्चित पत्रकार रबि लामिछाने यति बेला फेरी विवादमा तानिएका छन । पछिल्लो समय उनले प्रचण्ड
यी ४ राशी भएका व्यक्ति सधै अरुकाे मनमा राज गर्छन् ! धनी बन्ने सबै गुण ह्न्छ यीनमा ! जानी राखौ
धेरै सम्पति कमाउने सुखी जिन्दगी बिताउने चाहना सबैको हुन्छ। जसले धन सम्पति कमाउँछन् उसको जीन्दगी
थाहा पाइराखौ जाडोमा घाम ताप्दै बदाम खानुका यस्ता छन्
के रवीलामिछानेको चर्चित कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम बन्द
यी ४ राशी भएका व्यक्ति सधै अरुकाे मनमा राज
आज बिहिबार,बिहीबारको दिनमा श्री केदारको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै